နားခိုရာ: ငယ်ငယ်တုန်းက Weekend တွေ
Posted by little moon at 12:10 PM
DVD နဲ့ ပြ လည်းရပါတယ်
အကို ငယ်ငယ်က weekend အကြောင်းက ဖတ်ရတာ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသလို ထူးဆန်းတယ် ပျော်စရာကောင်းတယ်နော်
အကို့အဖေက အတော်ချစ်တယ် စိတ်ကူးလေးလည်း ကောင်းတယ်
ရထားလည်း စီးရတယ် ရေခဲချောင်းလည်း စားရတယ် ရုပ်ရှင်လည်း ကြည့်ရတယ် အသားကင်တွေလည်း စားရတယ် ပျော်စရာကောင်းသဗျာ
အခုကျတော့ အကိုက အဖေနေရာကနေ လိုက်ပို့စရာ သားလေးရှိလာပြီဆိုတော့ ကလေးလေးကံကောင်းလိုက်တာ
တို.တွေ ကတော. မြို.လည် ခေါင် မှာ ရုပ်ရှင် ကြည်.ပြီး ရေ ကျော် ကို လမ်းလျှောက် ပြန် ကြတာဘဲ။ ဂုဏ်ိရုံ နောက် ဆုံးတန်း ကတော. သမီးရည်းစား တုံးကပေါ.။ အဂ်လိပ်ကား မှောင် မှောင် လေးတွေ ကြည်.။
ဆူးလေ က နေပြည် တော် ထင်ပါရဲ. ကျော်သူ ကား ကတော. တန်းစီ ပြီး ကြည်. နှစ်ပွဲ ဆက်ကြည်.ပြီး ခေါင်း တောင် မူး တယ်။
ကု လားကား ကတော. ပေရှည် လို. တမင် ရည်းစား နဲ့ မှ ကြည်.ရတယ်။ ကြာ ကြာ ကြည်.ရ မှ တန် တာ မဟုတ် လား။ သမတရုံ က ၈ ကျပ် တန် ၁၀ တန် ကလဲ ရည်းစား နဲ. ဘဲ ကြည်.။ တော် ပါသေး ရဲ. ကလေး မရှိ လို. ကိုယ့်လို ဆိုးရင် အခက်….
ဒီ post ကိုဖတ်ပြီးတော့ ငယ်ငယ်ကအကြောင်း ပြန်သတိရသွားတယ်။ အဖေနဲ့ ကျွန်တော် နှစ်ယောက်သား ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းက ကိုထွန်းထွန်းတို့ သားအဖလိုပဲ ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ကြတာ။ တစ်ခါတော့ ကြည့်ချင်တာကအင်္ဂလိပ်ကား၊ ရုံမှားပြီး သွားကြည့်ကြတာက ကုလားကား။ ပထမတော့ ကုလားကားကို Trailer ပြနေတာလို့ထင်ပြီး ကောင်းကောင်းထိုင်ကြည့်လိုက်တာ နောက် ၁၅မိနစ်လောက်နေမှ မှားမှန်းသိတော့တယ်။ :p
သားလေးကို ရုပ်ရှင်လိုက်ပြ၊ ဆီချက်လိုက်ကျွေးရင် ဒီလို ဈေးနှုန်းတွေနဲ့ မဟုတ်တော့ဘူးနော်။ ပိုက်ဆံကို ဂုန်နီအိတ်နဲ့သာ သယ်သွားပေတော့။